Impambano ye-Alt-Right, i-Bannon-Approved 'The Camp of the Saints' - Ezopolitiko
Eyona Ezopolitiko I-Alt-Right Bible 'Camp of the Saints' Ingqina ukuba wonke umntu usaphambene
I-Alt-Right Bible 'Camp of the Saints' Ingqina ukuba wonke umntu usaphambene
Umlungu welizwe elimhlophe uRichard Spencer, owadumisa igama elithi 'alt-right,' uthetha ngexesha lenkomfa yeendaba e-Curtis M. Phillips Centre yoBugcisa boBugcisa ngo-Okthobha 19, 2017 eGainesville, eFlorida.UJoe Raedle / Getty Izithombe
Izihloko ezifundwayo ubukhulu becala ziyafana: I-CNBC: ‘Iikharavani’ ezifudukayo zihlangana kumda wase-US-Mexico ; IWashington Post : ‘Iikharavani’ ezifudukayo zihlangana kumda wase-US-Mexico ngesityholo sokugqibela ; Umhloli waseWashington : Abokuqala abafudukela kwiikharavani baseMexico bafika kumda wase-US .
Ukanti kumalungu e-alt-ekunene, ezi ayizizo zihloko kakhulu njengesiprofeto esenziwe kwiminyaka engama-45 eyadlulayo. Ngo-1973, umbhali ongumFrentshi uJean Raspail wapapasha Inkampu yeeNgcwele , iguqulelwe kwisiNgesi njenge Inkampu yeeNgcwele . USteve Bannon unayo ngokuphindaphindiweyo wenza ireferensi kwisicatshulwa, esisebenzisa njengesishwankathelo seemeko ezimbi kakhulu zokufika. URadix kaRichard Spencer wayibhengeza eyona yokuqala kwaye yagweba ukuba ingxelo kaRaspail, nokuba yeyiphi na ebaxiweyo ngenxa yempembelelo, yayiyi-distillation kunye nokuqina kwenyani ebonakalayo.
Isakhiwo sencwadi siyafana namabali anamhlanje: Ngaba iNtshona inentando yokugxotha ukufuduka kweLizwe lesiThathu? Nangona inoveli- iyintsomi kunayo nayiphi na enye into- ingaziwa kakhulu ngabantu ngokubanzi, ngenxa yokuba ubume bemihlali sisihlwele esimalunga nendawo enye esondele kuAyn Rand IAtlas Shrugged yenzelwa oonkululeko.
Ngelixa uMongameli wase-France u-Emmanuel Macron elumkisa i-Congress kwiveki ephelileyo ngomsebenzi wobuzwe obaxekileyo, u-Raspail wayefuna ukulumkisa ngokuchaseneyo: umhlaba ongenamida. Inkqubo yakhe yenye yeenoveli ezinobuhlanga ezakhe zapapashwa. Ukuba umsebenzi wakhe unje IAtlas Shrugged kubuvangeli bayo, indlela yakhe yokubhala ifana neRandi ngeyona ndlela imbi kakhulu. Iphepha emva kwephepha ligcwele iintetho, kwaye umbono we-nuance phakathi kwabalinganiswa awukho. Kodwa ngexa leRandi i-1,100+ iphepha le-magnum opus linesinye sezona zakhiwo zinzima kwezakha zabhalwa, iyelenqe le Inkampu yeeNgcwele inokushwankathelwa ngokulula (abonakalisi ahoy).
Iqela labantu abangamaIndiya abasisigidi lahlanganisana kwiinqanawa ezininzi kumlambo iGanges. Bakhokelwa yindoda enkulu eyaziwa njenge-turd eater, echazwe njenge- [u] ntethableable pariah, le dealer kwi-droppings, roller dung by trade, molder of manyure briquettes. Ukuthwala phezulu emagxeni akhe ngumntwana wesilo, osebenza njengesidenge sabo quasi-mesiya:
Ezantsi, iziphunzi ezibini; emva koko isiqu esikhulu, sonke sizingelwe saza sajijekeka saza samila kakuhle; akukho ntamo, kodwa luhlobo lwesiphunzi esongezelelweyo, esesithathu endaweni yentloko, kunye nenkqayi encinci enenkqayi, enemingxunya emibini yamehlo nomngxuma womlomo, kodwa umlomo owawungengomlomo kwaphela — awukho umqala, akanamazinyo-kukuqhwaba nje kwesikhumba phezu komqala wakhe.
Iinqanawa ngokuthe ngcembe ziqala ukuya eFrance, njengoko ilizwe liphela libukele.
Ithemba lokuba ingxaki iya kuzisombulula ngokwalo ngenxa yemozulu okanye ezinye iZenzo zikaThixo ziyawa. Kwiindawo ezahlukeneyo iinqanawa zilahlekile, kwaye uninzi lweembacu zifa ngexesha lohambo. Ekuxeleni kukaRaspail, kwakungekho mahluko phakathi kombaleki omnye nolandelayo, inye nje inyama-iicentipedes zokuqala zabantu (kwaye abanye, ndicinga ukuba ngabantu abalungileyo). Indlela abalisebenzisa ngayo ixesha labo inokuchazwa ngokungafaniyo njengezilwanyana:
Kwaye kuyo yonke indawo, ubunzima bezandla nemilomo, iipalus kunye neerump. Iimpahla ezimhlophe ezihamba ngokungxama, ukujonga iminwe. Amakhwenkwe amancinci, adlula ukusuka kwisandla esiya kwisandla. Amantombazana amancinci, angavuthwanga kwaphela, elele kunye esidleleni ukuya ethangeni, elele kwindawo enengalo yeengalo, kunye nemilenze, neenwele ezibalekayo, evuka kumdlalo othuleyo wemilebe enomdla. Amalungu obudoda atsholoza e-hilt, iilwimi zikhomba indlela yazo kwi-scabbards yenyama, amadoda adubula amadlozi abo kwizandla zamabhinqa. Yonke indawo, imilambo yesidoda. Ukuhamba ngaphezulu kwemizimba, ukuphuma phakathi kwamabele, neempundu, kunye namathanga, nemilebe, kunye neminwe. Imizimba ngokudibeneyo, hayi ngababini, kodwa kubathathu, kubane, kwiintsapho zonke zenyama zibambekile kubundlobongela obunobunkunkqele kunye nokudlwengulwa okufihlakeleyo. Amadoda nabafazi, amadoda ngamadoda, amabhinqa nabafazi, amadoda nabantwana, abantwana kunye, iminwe yabo emincinci edlala imidlalo yanaphakade yolonwabo lwenyama.
Njengokuba iinqanawa zijikeleze iKapa leThemba eliHle, urhulumente wocalu-calulo wase Mzantsi Afrika (laa mbuzi ungena mda, ojolise kwisazela sokuzenza amalungisa) ubanika ukutya. Ngokumangalisayo, iphoswa elwandle ziimbacu. URaspail ucacisa ukuba kufuneka unike irhamncwa ityala […] Yitsho into oyithandayo, ibisesenzo sobuntu […] Abo bantu banobuhlanga, abantu abalungileyo? Qaphela ngoku! […] Abamhlophe bangavuka, bothuke kwaye bakhululeke xa bezifumana betsalelekile kwabo babekade bezinto ezinobuhlanga, njengabo!
Ekugqibeleni iinqanawa zibonakala kunxweme lwaseFrance. Onke amehlo ajonge kumongameli waseFrance. Ngaba uza kuguqula isigidi esinye sabantu abamsulwa abalambayo? Ngaba ngesazela esilungileyo unokusebenzisa amandla ngokuchasene nabaninzi abangazange benzakalise mntu? Uyalela umkhosi ukuba uvule umlilo xa kukho imfuneko, kodwa uvumela onke amajoni ukuba avumele intliziyo yakhe kunye nesazela sithethe phandle kwaye bathathe isigqibo malunga nokuba bayatsala na. Ngenxa yemiboniso emininzi apho abantu bebevuma, Sonke sisuka eGanges ngoku !, bambalwa kakhulu abathobela umnxeba.
Inqanawa ifikelela elunxwemeni, kwaye iFrance ikhawuleza igqithe. Abambalwa abantu baseFrance bayabaleka, benza ukuma kwabo kokugqibela eSwitzerland. Badityaniswa ngabantu abambalwa ngombala: Ukuba mhlophe ayingombuzo wombala ngokwenyani. Ingqondo epheleleyo. Wonke umntu omhlophe ophakamisa umthetho-nokuba uphi okanye nini-unabamnyama ecaleni. Oku kusinda eSwitzerland kuhlala ixesha elifutshane, njengoko sifunda. Iziseko zaseSwitzerland, nazo, zazifakwe ngaphakathi. Irhamncwa lalimthobile, kodwa kancinci kwaye ngokuqinisekileyo, kwaye kwamthatha nje ixesha elide ukuba aqhekeze. […] Ezinzulwini zobusuku ngoku, imida yakhe iya kuvulwa.
Inkampu yeeNgcwele kwaye indlela ubani ayijonga ngayo ingumfuziselo wentetho yezopolitiko ethuthukayo. Ukusuka kwimbono ye-alt-ekunene, ichanekile kuzo zonke izinto eziyimfuneko. Nokuba uvela e-India okanye eMexico, i-United States ihlaselwa ngabantu abangafaniyo nathi, abangathethi nolwimi lwethu-singasathethi ke ngokwabelana ngamaxabiso ethu. Okubi nangakumbi, kungekudala baya kuba baninzi kunathi. I-Raspail yayingeyonto ukuba ayingokwesiprofetho, kubandakanya nebango lakhe lokuba ubuhlanga buya kusetyenziselwa ukugxotha imeko kaxakeka xa kufikwa kulondolozo lwesizwe.
Ngo-1964, Uphengululo lweLizwe UJames Burnham wapapashwa Ukuzibulala kweNtshona . I-Populist uPat Buchanan walandela kunye Ukufa kweNtshona ngo-2001. Ingongoma ka-Buchanan-ethandwa kakhulu kwizangqa zase-Right Right namhlanje-kukuba izizwe ezizizityebi azizali ngokukhawuleza kwaye ziya kugqitywa liLizwe lesiThathu eliza kulawula. Imiyalezo ethe rhoqo yokuchasana nokuzala kwakhona ngenxa yobuninzi babantu-ejolise ikakhulu kubaphulaphuli baseNtshona kunamazwe ahluphekileyo-ithathwa njengophawu lwenjongo yecebo elibhekisa kwinto ekubhekiswa kuyo njengokufuduka kwabantu.
Umntu angavuma ukuba amabango obuhlanga asetyenziswa ngokufanelekileyo ukugxotha izinto ezininzi ezandleni kwaye aziqhubele kwingxoxo kuqala. Kodwa kwiminyaka engama-45 kamva, okucacileyo-ngokuzingca okucacileyo-ubuhlanga bencwadi kaRaspail ayikapheli kakuhle.
Imfano-ngqondweni yamaNdiya, ekucingelwa ukuba isekelwe kwibhayoloji engabalulekanga, ayisiyiyo yezilwanyana eziphikisayo ezingaphantsi komntu kodwa ingumntu onceda abantu baseNtshona ngenkxaso yezobuchwephesha, ehambisa iingcebiso zobuchwephesha ngolwimi olungelolwabo. Ngokuyinxenye ngenxa yempixano eyomeleleyo yamandulo yamaIndiya amaSikh namaHindu kwinkcubeko yamaSilamsi, bambalwa kakhulu kwizangqa zesizwe ezinoxhalabile ngokufudukela eIndiya. Phantse bonke oosomashishini abaluhlanga ababengabahlali belizwekazi laseIndiya njengeCaucasian, kwaye i-India kutsha nje ibinevenkile ekuthiwa yiHitler kunye ne-ice cream. Iinduna zaseIndiya zisezantsi kakhulu kunokuba sisisongelo kunamaqhinga amaPersi aseIran okanye amaKorea asemantla.
Yintoni iRaspail kwaye uninzi lwabo balandela impikiswano yakhe yeentsomi kukuba ukufudukela kwelinye ilizwe kungalawulwa kwinto abanye abanokuthi ngamanani afanelekileyo. Kuyavunywa, ingqiqo ligama elisisiseko, elithetha nje ukuba isithethi siyayamkela into abayicebisayo. Kodwa njengokuba uMongameli uDonald Trump elungiselela ukushenxisa ikharavani yamakhulu ambalwa abantu, umbono wokuba inkcubeko yaseNtshona iza kugwetyelwa ukutshabalalisa indlela ezenza ngayo izandi ezinje ngamabango eengcinga zotshintsho lwemozulu. I-Apocalypses yenza uvuthondaba olukhulu kwiinoveli, kodwa besikhe seva malunga nokuphela kwehlabathi isibini seminyaka ngoku.
Oko sikuva kancinci nangaphantsi kulo naluphi na uhlobo lwengxoxo xa kufikwa kwimicimbi ebalulekileyo enjengokufudukela kwelinye ilizwe. Nokuba ngubani na olapha ngandlela thile unelungelo lokuba lapha-okanye nabani na olapha ngokungekho mthethweni akapheleli nje ekungabikho kwamaxwebhu kodwa uswele amalungelo, nokuba, ngokugqithileyo, nkqu nokubonakala ngokupheleleyo koluntu. Njengokuba intetho yethu yesizwe iqhubeka ukonakala ngexesha likaTrump, yonke imiqondiso yalatha kwisebe lezomthetho ngokuya libizwa ukuba lithathe izigqibo phakathi kwamacala amabini angakwaziyo ukunxibelelana. Ngokwenyani siba ngabasemzini omnye komnye.
Imbali emfutshane yaBapopu abancinci
I-Snapchat 'Micro' iyakwenza iDick yakho ijongeke incinci
'Supergirl' Ukuphindaphinda 1 × 3: Ukugcina kunye namaKryptonia
Indoda yokugqibela emhlabeni tandy
umva wokulandelela inombolo yefowuni
Ihardd ford adam umqhubi uyankqonkqoza
bruddah iz kwenye indawo ngaphezulu komnyama
yeyiphi eyona oyile ye-cbd ilungileyo yokuthenga
411 ukujonga kwakhona ngenombolo yefowuni
amanyathelo okuqala okuvota ejezi 2016